Abavelisi bamaKhadi eKhadi lehotele-abaThengi bamaKhadi eKhadi abaXhasi kunye neFektri
I-VING / i-ADEL / iSalto / iHune / i-HID / i-Beteck / i-Beline encodd
I-MIND inikezela ngeekhowudi zekhowudi zehotele zeRFID ezifakwe kwi-Assa Abloy inkqubo yokutshixa kwihotele, engamakhadi eemoto eVing.
Amakhadi ethu ehotele eVing aquka iinguqulelo ezi-3 zeekhibhodi zeendwendwe zehotele: IVing Ultralight EV1 inguqulelo yakudala, iVing Ultralight EV1 inguqulelo entsha kunye neVing 1k uhlobo oluqhelekileyo, kunye nohlobo olunye lweVeric 4k kwii-keycards ezineememori zesayizi ze4KB.
Siqinisekisa i-98% ehambelana nombala kunye noyilo loyilo lwabathengi kwaye sinikezela ngeminyaka emi-2 yewaranti.
Imigca enemigca enemigca luhlobo lwekhadi lokufikelela ehotele elinamaxabiso aphantsi, ukudityaniswa ngokulula kunye nekhowudi. Kwingqondo kaChengdu, unokufumana umgangatho ophezulu weHico (ukunyanzeliswa okuphezulu) kunye ne-loco (ukunyanzeliswa okuphantsi) amakhadi egumbi lomnyango wehotele anexesha elifutshane kakhulu. Kananjalo sinikezela ngenkonzo yoyilo yasimahla kunye neesampulu zasimahla zovavanyo.